Korontada Waxbarashada - GO! DUGSIGA SPECTRUM (BULSHADA TIME / BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
Xirfad awood leh
spectrum School > koorsooyinka our > korontada > korontada
ah waxbarashada buuxda ee BSO baro inay ku rakibaan qalab cusub oo koronto ah guryaha. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale dib u cusbooneysiin kartaa iyo dayactir kartaa qalabyada jira. Waxa kale oo aad baran doontaa inaad ka shaqeyso goobo badan oo degaan iyo / ama qalab koronto. Tani waxay la socotaa Layli. Waa mid tababarka dhabta ah oo leh maaddooyin guud oo yar.
ah 2e Shahaadada Korontada ee BSO Baro oo isticmaalaan qalabka iyo qalabka loo isticmaalo koronto yaqaan. Aqoonteena waxaad ku baraneysaa sida loo isticmaalo farsamooyin tiro badan markaad eegto badbaadada, caafimaadka iyo deegaanka. Dhamaadka shahaadada 2e waxaad ku rakibi kartaa qalabka korontada ee guri cusub ama dib u cusbooneysiiya rakibaadda. Waxaad baraneysaa calaamadaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo jaantusyada korontada oo isticmaali. Waxa kale oo aad baraneysaa in aad raadiso qaladaadka shaxanka korantada. Waxaad baraneysaa inaad sawirtid silig, rakibo cabir, xalliyaan khaladaadka korantada iyo ku xir qalabka. Marka lagu daro qalabkan korontada fudud, saldhigga waxaa la dhigayaa shaqooyin dambe oo ku saabsan dhismayaasha korontada iyo / ama qalabka korontada.
ah 3e Shahaadada Korontada ee BSO baro in lagu rakibo qalabka korontada cusub ee guryaha ama dhismayaasha iyo in la dayactiro ama dib loo cusboonaysiiyo qalabyada hadda jira. Waxaad baraneysaa inaad si madax-bannaan u dhameeysid hawlo badan oo adag. Tababarkeena waxaad baraneysaa inaad ka shaqeyso qalabka qiyaasta, qalabyada nalalka khaaska ah, mashiinnada, kuleylka korontada, qalabka guriga ... iyo dayactirka yaryar. Waxaad baraneysaa dhammaan noocyada mashiinnada korantada, kontaroolada elektarooniga ah iyo xakamaynta xakamaynta, qalabka kor u qaada iyo farsamooyinka cabbiraadda sida loo isticmaalo warshadaha. Waxaad baraneysaa barnaamijyada tarjumadda PLC oo si otomaatig ah u xakameynaya kontoroolka fudud. Waxaad baraneysaa sida loo xisaabiyo kharashaadka iyo tixgelinta amniga, deegaanka iyo maareynta tamarta.
Inta lagu jiro Meeleynta TSO koronto waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaad kaloo dhadhan kartaa xaalada dhabta ah ee shaqada sida qaloocsan.
Miyaad xiiseyneysaa Waxbarashada Labada ah? Ka dibna hubi inaad eegto tababarkayaga Qalabka Korantada - Shirkadda Dual Electric!
Ma xiiseyneysaa qalabka korontada iyo mashiinada? Miyaad munaaqashooneysaa oo saxantahay? Ma jeceshahay inaad la shaqeyso gacmahaaga, laakin sidoo kale kombiyuutarka? Kadibna jihadaas TSO koronto Waxaa laga yaabaa inaad wax uun u baahato.
Waxaad mar walba ku bilaabi kartaa koorsada korantada ee TSO, inkastoo aqoonta asaasiga ah ee qalabka iyo qalabka ay hubaal tahay in lagu daro. Waxaad helaysaa maaddooyin guud oo kooban, laakiin ha iloobin in qaar ka mid ah fahamka xisaabta loo baahan yahay koorsadan.
Tababarka horudhaca ah ee hordhaca ahi waa 1 heerka warshadaha
Kadib shahaadada 3e korontada waad heleysaa shahaadada ee Waxbarashada Sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa barashada farsamada Korontada Shaqaalaha of Korontada Shaqaalaha Dual. Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare Ma waxaad tahay koronto yaqaan buuxa oo aad shaqo bilaabi karto goobta shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga. Shaqooyin badan ayaa laga heli karaa qaybta. Markaa si dhakhso ah ayaad u bilaabi kartaa!
Sannadka 3e ee kooban (37KB, .pdf)
Sannadka 4e ee kooban (37KB, .pdf)
Sannadka 5e ee kooban (37KB, .pdf)
Sannadka 6e ee kooban (37KB, .pdf)